SYMACH palletizers। विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता र लाभदायक - आलु प्रणाली पत्रिका
SYMACH palletizers। विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता र लाभदायक
तपाईले कति वटा आलु बढाउनु पर्छ एक स्वचालित palletizer सौदा बनाउन? कुन मोडेल तपाईले छनौट गर्नु पर्छ? यस्तो लगानी कहिले भुक्तानी हुनेछ?
हामीले एग्रोट्रेड कम्पनीको प्याकेजिंग उपकरण डिभिजनका प्रमुख मिखाइल अफरिनोवलाई भनेका यी उत्पादन र कृषि उत्पादनहरूका अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि जुन उनीहरूको उत्पादनको आपूर्ति बढाउने योजनामा ​​छन्।
Palletizers SYMACH। प्रभावशाली वर्तमान मेशिनहरू
- मिखाइल, अब "वर्णमाला" बाट सुरु गरौं: प्यालेटिजर भनेको के हो? कसलाई यसको आवश्यकता छ र किन?
- Palletizer (palletizer) - एक प्यालेट मा सामान को स्वचालित स्ट्याकिंग को लागी एक मेशिन, सामान्यतया यो प्याकेजि line लाइन को अन्तिम लिंक को रूप मा कार्य गर्दछ।
एक नियमको रूपमा, त्यस्ता उपकरणहरू बरु ठूला खेतहरू द्वारा खरिद गरिन्छ: भन्नुहोस्, करिब १००० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्दैछ र राम्रो उत्पादन सूचकहरू छन्।
त्यस्तो मेसिन खरीद गर्नेहरूका लागि के फाइदाहरू छन्? पहिलो कामको गति हो - १ minute देखि pac 13 प्याक प्रति मिनेट (मोडेलमा निर्भर गर्दै): यस्तो गति व्यक्तिको शक्ति भन्दा बाहिर हुन्छ। दोस्रो - उच्च गुण: मेशिनले सामानहरू ठीकसँग र समान रूपमा राख्दछ। यस अवस्थामा, स्ट्याकि height उचाई २ मीटर cm० सेन्टीमिटरसम्म जान्छ। तेस्रो प्यालेटको स्थिरता हो। प्यालेट जुन स्वचालित ढ automatically्गले स्ट्याक हुन्छ, यसको आकार कायम गर्दा लामो दूरीमा ट्रान्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। लोडिंग / अनलोडिंगसँग कुनै समस्याहरू छैनन्, कार्गोमा क्षतिको सम्भावना व्यावहारिक रूपमा समावेश गरिएको छैन। र चौथो "मानव कारक" को प्रभावको उन्मूलन हो। Palletizers फार्महरु द्वारा खरीद गरीन्छ कि खुद्रा चेन वा प्रशोधन संयंत्रहरु संग सम्झौता छ। उनीहरूले ढुवानीमा ढिलाइ गर्न सक्दैनन् किनकि चालकहरूले उनीहरूको तलब पाइसकेका छन् र एक हप्ता काममा जाँदैनन्।
- यो प्राय: palletiers को बारे मा भनिन्छ कि यो मेशिन को एक मात्र दोष मूल्य हो। लगानीमा फिर्ती कती चाँडो हुन्छ?
- साधारण मोडलको एक स्वचालित प्यालेटाइजरको लागत १ 150० हजार यूरो, एक सुसज्जित मेशीन - करिब २ 270० हजार यूरो। तर यदि तपाइँ प्यालेटहरू स्ट्याकिंगमा संलग्न कर्मचारीहरूको भुक्तानीको लागि उद्यमको लागत गणना गर्नुहुन्छ (यसबाहेक, आउटब्याकमा तलब लिनुहोस्, र उपनगरीय शहरहरूमा आधारको रूपमा होइन) भने, यो बाहिर जान्छ कि स्वचालनमा सबै लगानीहरू years बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको अवधिमा भुक्तान हुन्छ।
- कम्पनी "एग्रोट्रेड" यस्तो उपकरणहरूको सब भन्दा ठूलो निर्माताको एक डिलर हो - कम्पनी SYMACH... यस ब्रान्डको palletizers को फाइदाहरू के हुन्?
- SYMACH एक नियम छ कि कुनै पनि मेसिन, यसको लागत, प्रदर्शन र कन्फिगरेसन को परवाह नगरिकन, सामान्य आवश्यकता पूरा गर्नुपर्दछ: उच्च गुणस्तरको फ्लो provide्ग प्रदान गर्न। यदि हामी साधारण मोडल SYMACH MACH2वा सबै भन्दा उन्नत SYMACH MACH 8 लिन्छौं भने, सबै प्यालेटहरू समान रूपमा राम्रो र मजबूत देखिनेछन्।
तर सामान्यतया, यी धेरै विश्वसनीय र उच्च-गुणवत्ताका मेशिनहरू हुन्।
- palletizers को विभिन्न मोडेल बीच के फरक छ?
- उत्पादकता, स्वचालनको डिग्री। मुख्य फरक, मेरो विचारमा, र्यापरको उपस्थिति / अनुपस्थिति हो। मेसिनले सामानहरू केवल प्यालेटहरूमा राख्न सक्दछ वा र्यापिpping (स्ट्रेच फिल्म वा नेटि।) पनि गर्न सक्दछ। र्यापरको उपस्थितिले अनावश्यक म्यानुअल कार्य हटाउँदछ।
- र यदि तपाईं गत दशकको मोडेल र आधुनिक तुलना गर्नुहुन्छ? डिजाइन कुन दिशामा गइरहेको छ?
- पहिलो नजरमा, कारहरू, उदाहरणका लागि, २०१ 2013 मा रिलिज गरियो, र आधुनिक मोडेलहरू समान छन्, तर त्यहाँ निश्चित भिन्नताहरू छन्। उदाहरण को लागी, actuators परिवर्तन भएको छ: हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक ड्राइव द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ - सरल, अधिक कॉम्प्याक्ट र विश्वसनीय।
म भन्दछु कि अन्य सबै परिवर्तनहरू कारहरू अधिक विश्वसनीय र अधिक उत्पादक बनाउने इच्छासँग सम्बन्धित छन्। SYMACH सँग कामको विशाल अनुभव छ, यो निरन्तर यसको प्रविधिको सुधार गर्न काम गरिरहेको छ, प्रयोगकर्ताहरू, डीलरहरूको प्रतिक्रियाको आधारमा हाम्रो।
- एक palletizer एक जटिल मेसिन हो, के तपाईं सक्षमता संग यसको काम प्रबन्ध गर्न सिक्न आवश्यक छ?
- कसरी मेसिनले काम गर्दछ, व्याख्या गर्दै, आवश्यक छ। तर सिक्ने प्रक्रिया लामो समय लिन सक्दैन। आधुनिक प्रविधि यस्तो तरीकाले डिजाइन गरिएको छ कि कारहरू खेल मोडमा व्यावहारिक रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ। त्यसैले प्यालेटिजरहरू टच स्क्रीनसँग सुसज्जित छन्, जसमा सबै सहज हुन्छन्: नयाँ स्ट्याकिंग योजना सिर्जना गर्न, उदाहरणका लागि, तपाईंले निर्देशांक, कुनै जटिल संख्याहरू प्रविष्ट गर्न आवश्यक पर्दैन, तपाईंले बस पर्दामा रहेको ब्यागको छवि भएको आइकनलाई चाहिएको क्षेत्रमा सार्न आवश्यक छ।
- palletiزر एक लामो वारंटी छ? र यो अवधि समाप्त भएपछि कसरी सेवाहरू गरिन्छ?
- वारेन्टी अवधि निर्माता द्वारा स्थापित गरिएको छ, SYMACH प्लान्ट का उत्पादनहरु को लागी १ बर्षे को वारंटी छ। यस अवधिमा, डिलर कम्पनीका कर्मचारीहरूले यी सेवाहरूको लागि थप भुक्तानी नगरी मेशिनको अपरेशन नियन्त्रण गर्छन्।
यसबाहेक, खरीददारले पहिले नै सशुल्क सेवाको लागि उनीहरूसँग सम्झौता गर्न सक्छन्।
अनुभवको आधारमा, म तुरून्तै भन्न सक्छु कि उचित अपरेशनको साथ, यस प्रविधिलाई एक वा पाँच बर्षसम्म केही हुँदैन। एक नियमको रूपमा, यो अवधि भित्र बेयरिंगहरू प्रतिस्थापन गर्न पनि आवश्यक पर्दैन। र भविष्यमा, मेशिनहरू ज्यादै स्थिरताले काम गर्दछन्: हामीले २०१ 2013 मा पहिलो प्यालेटिजर प्रदान गर्यौं, र यसले अझै राम्रोसँग यसको कार्यहरू गर्दछ।
तर यदि कुनै समस्या अझै पनी ध्यान दिइयो भने हामी कसैलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दैनौं। कहिलेकाँही हाम्रा विशेषज्ञहरूले फोनबाट सल्लाह दिन सक्छन् (हामी त्यस्ता सेवाका लागि पैसा लिदैनौं)। अधिक गाह्रो अवस्थामा, कर्मचारीहरू स्थापना साइटमा जान्छन्। खैर, हाम्रो ग्राहक सेवा लगभग २//24 काम गर्दछ।
- वर्तमान क्वारेन्टाइन र उत्तर-संगम शर्तहरू अन्तर्गत नयाँ प्यालेटिजरलाई ग्राहकमा पुर्‍याउन कति समय लाग्छ?
- SYMACH BV मा प्यालेटिजरको उत्पादन समय 5--7 महिना लाग्छ (यस उपकरणको लागि लामलाई ध्यानमा राख्दै)। डेलिभरी - लगभग दुई हप्ता
सामान्यतया, यदि एक फार्म अर्को फसल को समय को लागी एक नयाँ स्तर पुग्न सोच्दै छ, अब तपाईं उपकरण अर्डर गर्न आवश्यक छ।
दिशा "प्याकेजिंग उपकरण"
(831 461१) 91 58१ 8 910,, - - 899 १०० 62 93 XNUMX XNUMX XNUMX af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af af